Hyouka: Forbidden Secrets ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
Anime ကို Live Action အဖြစ်ပြန်အသက်သွင်းထားတဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ … ပျိုမေတို့အသည်းစွဲ Kanto လေးလဲပါတယ် … ကိုယ်ကတော့ Kento ကို Orange Live Action မှာထဲက အသဲစွဲခဲ့သူပါ …
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးပြောပြမယ်နော် … အတိုချုပ်လေးပဲပြောမယ် …
Kento လေးကတော်ဒီကားထဲမှာဖြင့် ဟိုအုတရိုအိုရဲခိ-ခွန် နာမည်နဲ့ပဲ … သူ့မှာဆောင်ပုဒ်တခုရှိတယ် … အလုပ်ရှိရင်လုပ်မယ် မရှိရင်မလုပ်ဖူးတဲ့ …
သူ့မှာလုပ်စရာတခုပေါ်လာပြီဆိုရင် သေချာတိကျစွာ လုပ်တတ်သူလးပါ …
သူ့မှာ အစ်မတယောက်ရှိတယ် … သူကတော့ကမ္ဘာပတ်နေတာ … အစ်မ က ဟိုအုတရို အထက်တန်းကျောင်းတက်ရတော့ မောင်ကိုအကြံပေးစာတခုရေးလိုက်တယ် … အဲဒါကတော့ကျောင်းမှာ ဝင်ရမယ့်အသင်းကို ရေးပေးလိုက်တယ် …
အစ်မရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အသင်းထဲ ချီတန်ဒ-စံ ဆိုတဲ့ စူးစမ်းတတ်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့သွားတွေ့တယ် … သူတို့နှစ်ယောက်က အလယ်တန်းထဲကကျောင်းတူတူပဲဖြစ်နေခဲ့တယ် …
အဲဒီလိုနဲ့အမပြောတဲ့ အတိုင်းအသင်းထဲကို ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဝင်ခဲ့ပေမယ့် … ချီတန်ဒ နဲ့တွေ့တော့ပြောင်းလဲသွားတယ် …
ဘာပြောင်းလဲသွားတာလဲဆိုရင် ချီတန်ဒ ရဲ့ဦးလေးက အရင်ဒီက လက်စစ်အသင်းဝင်ပဲ … သူ့ဦးလေးရဲ့ လွန်ခဲ့သော ၃၃ နှစ်က ကလက်ဒ်အသင်းဝင် ဖြစ်နေတုန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စလေးတွေရှိခဲ့တယ် …
အဲ့ကိစ္စတွေကနက်နဲတယ် … လက်ရှိတော့ ဦးလေးကဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ … ချီတန်ဒ က သူ့ဦးလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသင်းရဲ့နောက်ကွယ်က ကိစ္စကို အရမ်းသိချင်နေတော့ သူတယောက်ထဲကလဲ စုံစမ်းလို့မဖြစ်နဲ့ ဟိုအုတရိူ ကို အကူအညီတောင်းတော့တာပဲ …
ဟိုအုတရို ကလဲ မလုပ်ရင်လဲလုံးဝမလုပ်သူ , လုပ်ပြီဆိုလဲ …………………….
ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ သေချာကြည့်လိုက်ကြနော် ….
Rating အရတော့ IMDb မှာ 6.4/10 ရရှိထားပါတယ် …
Quality : 720 Blu-ray
Actors: Alice Hirose, Amane Okayama, Fujiko Kojima, Kento Yamazaki
Openload.co Myanmar 923 MB Download Soliddrive.co Myanmar 923 MB Download
Trailer: Hyouka: Forbidden Secrets ( 2017 )